तरकारी खेति गर्दै पूर्वअमेरिकी रास्ट्रपति ओबामा : नेपाली नेताले श्रम गर्न कहिले सिक्ने ?
बाराक हुसेन ओबामा (जन्म: ४ अगस्ट, १९६१) अमेरिकाका ४४औं राष्ट्रपति हुन्। उनी यस देशका प्रथम अश्वेत (अफ्रिकी अमेरिकी) राष्ट्रपति हुन्। उनले २० जनवरी, २००९ का दिन राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। ओबामा इलिनोइ राज्यबाट कनिष्ठ सेनेटर तथा २००८ मा अमेरिकाका राष्टपति पदका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेद्वार थिए। ओबामाले हार्भर्ड ल स्कुलबाट सन् १९९१ मा स्नातक गरे, जहाँ उनी हार्भर्ड ल रिभ्यूका प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी अध्यक्ष पनि भए। सन् १९९७ देखि २००४ सम्म इलिनोइ सेनेटमा तीन सेवाकाल पूरा गर्नुअघि ओबामाले सामुदायिक आयोजकको रूपमा काम गरे अनि नागरिक अधिकार अधिवक्ताका रूपमा प्रेक्टिस गरे। १९९२ देखि २००४ सम्म उनले शिकागो कानुन विश्वविद्यालयमा संवैधानिक कानुनको अध्यापन कार्य पनि गरे। सन् २००० मा अमेरिकी हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ सीट हासिल गर्न असफल भएपछि जनवरी २००३ मा उनको नजर अमेरिकी सेनेटतर्फ पर्‍यो जहाँ उनले मार्च २००४ मा प्राथमिक विजय प्राप्त गरे र नोभेम्बर २००३मा सेनेटका लागि निर्वाचित भए ।
१०९ औं कंग्रेसमा अल्पसंख्य डेमोक्रेट सदस्यका रूपमा उनले पारम्परिक हात-हतियारमाथि नियन्त्रण तथा सङ्घीय कोषको प्रयोगमा अधिक सार्वजनिक उत्तरदायित्वको समर्थन गर्दै विधेयक बनाउनमा सहयोग गरे। उनी पूर्वी युरोप, मध्य पूर्व र अफ्रिकाको राजकीय यात्रामा पनि गए। ११० औं कंग्रेसमा लबिइङग तथा चुनावी धाँधली, मौसम परिवर्तन, नाभिकीय आतंकवाद तथा युद्धबाट फर्किएका अमेरीकी सैनिकहरूको कल्याण सम्बन्धित विधेयक-निर्माणमा उनले सहयोग गरे। विश्व शान्तिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याए बापत बराक ओबामालाई वर्ष २००९ को नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो ।
जन्मेको एक महिनामा छाडेर गएका बाबुसँग ओबामाको अलि ठूलो भएपछि एक पटक मात्र भेट भएको थियो। बाराकका जन्मदिने पिताको सन् १९८२ मा गाडी दुर्घटनामा निधन भयो। बाराक दश वर्षको हुन्जेल इन्डोनेसियामै बसे। त्यसपछि आमापट्टिका हजुरबुबा स्टानले र हजुरआमा मेड्लिनसँग बस्न होनोलुलु, हवाई राज्य फर्के। उनी सन् १९७१ मा पुनाहोउ स्कूलमा कक्षा ५ मा भर्ना भए। सन् १९७९ मा स्नातक तह सके। डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका ओबामाले कोलम्बिया युनिभर्सिटि र हार्भर्ड ल स्कूलबाट स्नातक गरेका छन् ! बाराककी आमा सन् १९७२मा हवाई फर्किन्। सन् १९७७ सम्म त्यहीँ बसेर इन्डोनेसिया फर्किन्। इन्डोनेसियामा उनी मानिसको उत्पत्ति र सामाजिक सम्बन्धबारे अध्ययन गर्थिन्। त्यसपछिको बाँकी समय एन्नले इन्डोनेसियामै बिताइन्। सन् १९९४मा हवाई त फर्किन् तर त्यसको एक वर्ष नबित्दै उनको निधन भयो।
हार्भर्ड ल स्कूलबाट सन् १९९१ मा स्नातक गरेका ओबामाले दुइवटा लोकप्रिय पुस्तकहरू पनि लेखे। उनको पहिलो पुस्तक- ड्रीम्स फ्रम माई फादरः अ स्टोरी अफ रेस एन्ड इन्हेरिटेंसको प्रकाशन ल (Law) स्कूलबाट स्नातक गरेको केही दिनपछि गरिएको थियो। यस पुस्तकमा होनोलुलु र जकार्तामा बितेको उनको बाल्यजीवन, लस एन्जलिस र न्यूयर्कमा बितेको कलेज जीवन तथा सन ८० को दशकमा शिकागो सहरमा सामुदायिक आयोजकको रूपमा उनले नोकरी गरेका दिनहरूका संस्मरण छन्। पुस्तकमा आधारित आडियो बुकलाई सन् २००६ मा प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कारले सम्मानित गरियो। उनको दोस्रो पुस्तक द अड्यासिटी अभ होप मध्यावधि चुनावको तीन साताअघि अक्टोबर २००६ मा प्रकाशित भयो। छोटो अवधिमा नै यो पुस्तक बेस्टसेलर सूचीमा सामेल भयो। शिकागो ट्रिब्यूनका अनुसार पुस्तक-प्रचारको बेला मानिसहरूसित भेट-घाटको प्रभावले पछि गएर ओबामालाई राष्ट्रपति पदको चुनावमा उत्रिने हौसला मिल्यो।
ओबामा सन् २००८ नोभेम्बर ४ को निर्वाचनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भए। सन् २००९ जनवरी २० देखि ४४ औं राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यभार सम्हाले। त्यसअघि उनी इलिनोइ राज्यका सेनेटर थिए। अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित हुने उनी पहिलो अश्वेत हुन्। यो चुनावमा बाराक ओबामाले ५२ प्रतिशत मत पाए भने विपक्षी जन मकेनको पक्षमा ४७ प्रतिशत मत परेको थियो। त्यस्तै सन् २०१२, नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी, रिपब्लिकनका मिट रम्नीलाई हराउँदै पुन: दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए। धेरै पहिले अमेरिकामा काला जातिका मानिसलाई दासदासी राखिन्थ्यो। उनीहरूको किनबेच हुन्थ्यो। काला जातिका मानिसका मानिस बेचिनेदेखि राष्ट्रपतिसम्म पुग्नु ठूलो उपलब्धि हो। ठूलो प्रजातन्त्र अमेरिकाको सुन्दरता पनि यही हो।
फोटोमा देखिएका व्यक्तिलाई नचिन्ने मानिस संसार कमै छन् । जो अमेरिकामा दुई कार्यकाल चलाएका पुर्व राष्ट्रपति बाराक हुन । हुनत ओबामाको यो नै पहिलो फोटो होईन । भिभिआईपि जस्ता व्यक्ति जो जस्तो सुकै सेवा सुबिधा आफुँले भने बमोजिम पाउनसक्थे चुट्कीको भरमा । तर हाम्रा नेताज्यूहरुले अमेरिकी भू.पू. राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जस्तै आफ्नो शपिंग ट्रली आफै तान्नु पर्दैन, यत्ति हो, ढुक्क संग श्रम गरी खान मिल्ने देश बनाईदिए पुग्छ। बाँकी हामी नेपालीहरु आफै गर्छौँ । हाम्रा नेताहरुको पारा अनौठो छ । खोला तर्दा अर्कैले बोक्नुपर्छ, पानि पर्दा छाता अर्कैले ओढाईदिनु पर्छ । हुँदा हुँदा सम्मान गर्दा लगाईदिएको खाता समेत अर्कैले समालीदिनु पर्छ । मन्दिरमा जुत्ता समेत अर्कैले समाल्दिनु पर्छ । नेपाली नेतागणले श्रम गर्न र श्रमको सम्मान गर्न कहिले सिक्लान ?